Budata Offroad Racing 2 maka Windows
Budata Offroad Racing 2
Free Budata maka Windows (17.60 MB)
Budata Offroad Racing 2,
Ọpụpụ Ọpụpụ, nke so na aha mbụ na-abata nuche ma a bịa na egwuregwu ịgba ọsọ dabere na physics, nwere ndị egwuregwu 2 nde gburugburu ụwa. Dị ka nke a, a kwadebere usoro egwuregwu a wee hụ ya ọzọ nefu-nezie, akwadoro mgbasa ozi. Tụnyere egwuregwu mbụ, ebumnuche anyị anaghị agbanwe negwuregwu ebe anyị na -ezute ụdị ụgbọ ala ka mma; Anyị na -agba mbọ iru ebe ngwụcha na -enweghị ihe mberede ọ bụla nokporo ụzọ ahụ na -ekwo ekwo.
Ọpụpụ Offroad, nke bụ egwuregwu yiri Hill Climb Racing nihe banyere eserese na egwuregwu, na -enye ụgbọ ala 6 chọrọ usoro ịnya ụgbọ ala dị iche iche. Anyị nwere ike kwalite injin, nkwusioru, njikwa na taya nke ụgbọ ala anyị họọrọ. Ebe anyị na -asọ mpi dịkwa iche iche. Mgbe ụfọdụ anyị na -ahụ onwe anyị netiti ọzara, mgbe ụfọdụ na Mars, mgbe ụfọdụ nala shuga, mgbe ụfọdụ na osisi dị nebe ugwu.
Ọkwa egwuregwu siri ike, nke anyị na -esonye nọsọ nehihie na abalị, siri ike nke na ọ ga -achọ ka ọ mara anyị ahụ. Naka nke ọzọ, ihe isi ike ịkwọ ụgbọ ala nokporo ụzọ siri ike, naka nke ọzọ, mmanụ ụgbọ ala na -eru ka mmiri. Agbanyeghị, na -enweghị ihe ndị a, egwuregwu ahụ agaghị atọ ụtọ, ọ gaghịkwa adị iche na egwuregwu ịgba ọsọ ụgbọ ala ndị ọzọ.
Njirimara mpụga 2 atụmatụ:
Elu àgwà ndịna
Injin physics na -atọ ụtọ ma bụrụkwa eziokwu
Ụgbọ ala 6 dị iche iche site na ụgbọ ala egwuregwu ruo gwongworo nnukwu anụ
Ike ịkwalite akụkụ nke ụgbọ ala
Egwu 7 dị iche iche, ehihie na abalị
Ndị isi ọkwa na ọtụtụ ihe rụzuru
Ego ọla edo kwa ụbọchị na ụlọ ahịa egwuregwu
Offroad Racing 2 Ụdịdị
Nha faịlụ: 17.60 MB
Mmepụta: Obumo Games
Kacha ọhụrụ na: 11-10-2021
Ndụ nihi Speed ​​bụ a ezi uche racing ịme anwansị egwuregwu na ị nwere ike igwu na gị Windows...
Budata Asphalt 8 Asphalt 8, ya na aha ya bụ Asphalt 8: Airborne, bụ egwuregwu ịgba ọsọ ụgbọ ala...
F1 2021 bụ usoro ịgba ọsọ Formula 1 nke Codemasters mepụtara. F1 2021 Budata Akụkọ ọ bụla nwere...
Ebe ọ bụ na ọ bụ ngosi, nhọrọ ịgba ọsọ anyị na ụgbọ ala anyị nwere ike iji nwere oke njedebe. Site...
Dị njikere maka ụgbọ ala stunt ama egwuregwu? Nwee obi uto na egwuregwu a! Drivegbọala nnukwu anụ,...
A tọhapụrụ F1 2018 na Steam dị ka egwuregwu ịgba ọsọ nke usoro FIA Formula One World Championship...
Mobile game Onye Mmepụta Gameloft, mara maka ya ịga nke ọma ọduọ egwuregwu ndị dị otú ahụ dị ka...
Asphalt Xtreme bụ Gameloft si ọtụtụ egwuregwu ọduọ egwuregwu na mma visuals na-ekere òkè gameplay....
GRID Autosport bụ egwuregwu kachasị ọhụrụ na usoro GRID nke Codemaster mepụtara, amaara maka...
Project CARS 3 so na egwuregwu ịgba ọsọ ị nwere ike igwu na PC nwere eserese dị elu yana egwuregwu...
Ihe ịma aka BMW M3, egwuregwu gọọmentị na nefu nke usoro BMW M3 ọhụrụ, na -enye nnwale ule na...
Ọpụpụ Ọpụpụ, nke so na aha mbụ na-abata nuche ma a bịa na egwuregwu ịgba ọsọ dabere na physics,...